Yaa Caafimaadka U Fiican.. Qaxwada Mise Shaaha? | Xaqiiqonews
Yaa Caafimaadka U Fiican.. Qaxwada Mise Shaaha?
Shaaha iyo qaxwada waxa ay tartan ugu jiraan midkii qaadan lahaa naaneysta ah “cabitaanka ugu fiican” , madaama maalaayiin dad ah ay isku khilaafsanyihiin yaa fiican “qaxwada mise shaaha”, gaar ahaan xilliyada af bilowga.
Sida ay Xaqiiqonews ka soo tarjuntay webseetka “Insider”, labada cabitaanba jirka waxa ay siinayaan tamar iyo dareen feejignaan ah, madaama labadabada ay ku jirto maadada kafiin (Caffeine), iyo waliba noocyo kale oo ah lidka sunta jirka.
Cilmi baaris la sameeyey sanadkii 2005, ayaa lagu sheegay in dadka isticmaala maadada Kafiin uu hoos u dhaco halista ay ugu jiraan cudurka sokorta noociis labaad, sidoo kale waxaa aad hoos uga dhaca suurtagalnimada ay ku haleeli karaan cudurada wadnaha, sidoo kale maadada ayaa ka hortag u ah kansarada ku dhaca ilmo-galeenka, mindhicirka iyo midka beerka.
Sidoo Kale Aqri: Yaa-ku-fiican-cabitaanka-biyaha-kulal-mise-biyaha-qabow?
Halkii koob oo qaxwo ah waxaa ku jira inta u dhaxeysa 80-100 miligram oo maadada Kafiin ah, sida uu ku doodaayo cilmbi baare Christopher Gardner oo ka tirsan machadka akadeeemiyadda Standford ee qaabilsan baaritaanada ka hortagga.
Halka koobka Shaaha ah uu ka kooban yahay qiyaastii 30-50 Miligaram oo maadada Kafiin ah, taasi oo aad u yar marka loo barbardho qaxwada.
Methew Shaw, oo ah baare ku takhasusay cilmiga neerfayaasha kana tirsan jaamacadda kalifoorniya waxa uu xoojinayaa daraasaddan isaga oo leh “qaxwada waxaa ku jira maado Kafiin oo seddex jabbaar ka badan tan shaaha ku jirta”.
Baarayaasha ayaa aaminsan in qaabka jirka uga falcelinaayio maadada Kafiinka iyo faa’idada badsashadeeda ay ku kala duwanyihiin dadka.